Sheekooyinku meel walba way yaalaan waana ku xanuunsanahay. Barnaamij kasta oo ka mid ah baraha bulshada ayaa isku dayaya inuu wejigayga ku tuuro, degel kasta wuxuu isku dayayaa inuu igu soo jiito sheekadooda riix riix, haddase nooc walba wuxuu doonayaa shucuur ahaan ila soo xiriir khadka tooska ah. Fadlan ka dhig inay joojiso.
Ma jiraan wax ka fiican sheeko weyn oo uu sheegay sheeko-yaqaan sare. Laakiin helitaanka sheeko weyn ama sheekeeye weyn oo loo sheego waa arrin dhif ah. Sheeko-faneedyo waaweyn ayaa sheegta waxtarka sheeko-weyne maxaa yeelay waa ganacsigooda!
Dabcan, haddii iibsade uu haysto waqti uu ku daawado, dhageysto, ama u akhriyo sheeko, waxaa laga yaabaa inay si qoto dheer ugu hawlan yihiin astaantaada internetka. Laakiin waxaan ku doodi lahaa inay tani naadir tahay. Waxaanan aaminsanahay in tirakoobka warshadaha uu taageerayo ujeedadayda. Hal tusaale waa kobaca laba-godka ah iyo caan ka ahaanshaha (in ka yar 2-daqiiqo) fiidiyowyada "sida loo-sameeyo" ee internetka. Dadku ma raadinayaan sheekooyin, waxay raadinayeen xalka dhibaatooyinkooda.
Ma dhahayo shirkadaada waa inay iska dhaaftaa sheekada gebi ahaanba. Markaan baaritaanka sameyno oo aan horumarino sheeko ku qancisa, joornaalada iyo waraaqaha cadcad ee aan ugu talagalinno macaamiisheennu waxay qabtaan heer sare. Si kastaba ha noqotee, waxaan aragnaa dad badan oo dheeraad ah oo u imanaya kuna beddelaya boggaga macaamiisheena markaan bixinno xal lagu saxo dhibaatadooda.
In kasta oo qayb ka mid ah waxyaabahaagu ay tahay inay u sheegaan sheekada qasabka ah ee jiritaanka shirkaddaada, aasaasahaaga, ama macaamiisha aad caawineyso, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad haysato qoraallo kooban oo cad oo la hadlaya:
Macaamiilkeenna, Xarumaha Macluumaadka Nolosha, waxaa si caalami ah loogu aqoonsan yahay inuu yahay hoggaamiye hal-abuur ku leh warshadaha xarunta xogta iyo khuburo xagga amniga ah. Xaqiiqdii, iyagu waa xarun xogeed gaar loo leeyahay oo gaadhay heerka ugu sarreeya ee shuruudaha amniga federaalka ee la yaqaan - FEDRamp. Aasaasaha aasaasaha Rich Banta waa mid ka mid ah khubarada ugu shahaadada badan meeraha. Marka, halkii dib looga cusbooneysiin lahaa dukumiintiyada oo dhan, Rich wuxuu ansixiyaa qoraal kooban oo ay baareen oo ay qoreen kooxdeena oo sharraxaysa warbixinta. Muunad - NIST 800-53.
Mid kale oo ka mid ah macaamiisheennu waa xalka ugu sarreeya ee xirfadlayaasha qorista si ay u wareystaan ​​musharrixiinta farriinta qoraalka, mataleysay. Waa tikniyoolajiyad cusub oo sidan oo kale ah in runtii aysan jirin cid raadineysa nooca barnaamijkan xilligan. Si kastaba ha noqotee, isla go'aan qaadayaasha ayaa raadinaya macluumaad kale khadka tooska ah. Waxaan ka caawinay kooxdooda cilmi baarista iyo soo saarista liistada qiimo jaban shaqaalaha kaas oo kobciya kaqeybgalka, haynta iyo dib ugu soo laabashada maalgashiga.